၀ က်ဘ်ဆိုက် Vis ည့်သည်အားမေးရန်မေးခွန်း ၄ Martech Zone
၀ က်ဘ်ဆိုက် itor ည့်သည်အားမေးရန်မေးခွန်း ၄
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 1, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Avinash Kaushik သည် Google Analytics angelဝံဂေလိဆရာ။ မင်းသူ့ဘလော့ဂ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ Occam's Razor သည်ထူးခြားထင်ရှားသော web analytics ဖြစ်သည် အရင်းအမြစ်။ ဗွီဒီယိုအားထည့်သွင်း။ မရပါ၊ သို့သော်အောက်ပါပုံကိုသင်နှိပ်နိုင်သည်။
Avinash သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုဖော်ပြပြီးသင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မဖြစ်သင့်ရာကိုဆန်းစစ်ခြင်းအပါအ ၀ င်။ Avinash ကဖော်ပြသည် ကွမ်းခြံကုန်းဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုကုမ္ပဏီများအားကူညီသည့်ကုမ္ပဏီ။ သူတို့သည်မေးခွန်း ၄ ခုကိုသာမေးကြသည်။
ဤမေးခွန်း ၄ ခုသည်သင်၏ site နှင့်၎င်းကိုမောင်းနှင်သည့်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ဤမေးခွန်းများ၏အဖြေကိုသင်သိပါသလား။ မရရှိလျှင်, သင်မည်သို့လာမည့်အပြောင်းအလဲများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် ဦး စားပေးသလဲ
Web Analytic ရဲ့အကောင်းဆုံး Feature?
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်သင်၏ဆိုဒ် (သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်) တွင်မည်သည့်အရာကိုထည့်ရမည်ကိုခန့်မှန်း။ ကော်မတီသို့မသွားပါနှင့်။ ထုတ်လုပ်မှု၌သွင်းထားနှင့်ရလဒ်များကိုကြည့်! သင့်ရဲ့ site သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်မည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရလဒ်ကိုလမ်းညွှန်ပါစေ။
ဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှု၏စွမ်းအားကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေလိမ့်မည်။ အချိန်ယူပြီးဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သေချာပါစေ။ သင်၌ရှိသောမည်သည့် package ကိုမဆိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စဉ်းစားသင့်သည်။
Occam's Razor ဆိုတာဘာလဲ။
သင်က Occam's Razor ဆိုတာဘာလဲနှင့် Analytics နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်လိမ့်မည်ကိုသင်သိလိုလျှင် -
Occam ၏သင်တုန်းသည် ၁၄ ရာစုအင်္ဂလိပ် logician နှင့် Franciscan friar ဝီလျံ Ockham မှဖော်ပြသောမူတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနိယာမသဘောတရားအရဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု၏ရှင်းပြချက်သည်ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးယူဆချက်ကိုပြုလုပ်သင့်ပြီးရှင်းလင်းသောအယူအဆ (သို့) သီအိုရီ၏မမြင်နိုင်သောကြိုတင်ဟောကိန်းများတွင်ကွဲပြားမှုမရှိသောအရာများကိုဖယ်ရှားပေးသင့်သည်။
Occam's Razor, ဝီကီပီးဒီးယား
မှာ Mitch Joel ကို ဦး ထုပ်အစွန်အဖျား Separation ၏ခြောက် Pixels ရှာရန်
Tags: စာအုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းbwe12ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာအမြင်အာရုံကြောရောဂါDummies များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်စာရေးခုံဖြစ်ရပ်များချစ်ခြင်းမေတ္တာမိုဘိုင်း add-to- လှည်းနှုန်းထားများမိုဘိုင်းပြောင်းလဲမှုနှုန်းထွက်ပေါက်ဆုလာဘ်ဖန်သားပြင်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေပါရှာဖွေရေးကွန်ဖရဖြစ်ရပ်များကိုရှာပါလူမှုရေး bookmarkingလူမှုမီဒီယာညီလာခံဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်ရပ်များခဏနားပါချစ်သူ